Ibhulokhi yomese enezinto eziphelele: i-abs plastic, i-thermoplastic kanye nezinto zebanga lokudla. Amandla kagesi anama-36W 0.38A, ubukhulu bokupakisha ngama-290 * 227 * 340mm, isisindo senetha ngu-3.1kg. Ukunakekelwa okulula - Ukuhlanza okulula ngamanzi ompompi ngezandla. Lokhu kulola ummese kuyindlela engcono kakhulu yokulola imimese yakho yasekhishini nokonga isikhathi sakho. I-All-in-One Set, amasethi wommese abayi-5 kanye nezinti zezinti zingakhishwa ngegciwane ngesikhathi esisodwa
I-UV Cutting Board Sterilizer IKhabhinethi
I-UV Cutting Board Sterilizer IKhabinethi ifakwe ibhodi yokunquma ye-1-3pcs eyi-bacterial and mildew proof futhi kulula ukuyihlanza. Ukusebenza okugcwele kukwenza ube kwisitayela sempilo esinempilo. Kulula ukusebenza, ukwenza kahle kakhulu, futhi kungabizi kakhulu. Ukusebenza kahle kwe-Disinfection kufinyelele kuma-99.99%.
I-Tower Air Multiplier Fan engenabala
I-2-in-1 yokuhlanza umoya nefeni kupholisa isikhala sakho ngenkathi kuhlungwa i-99.79% yama-allergen kanye nokungcola. Idizayini engenabala kulula ukuyihlanza futhi iphephe ezinganeni.Zipholile ngenkathi unokuthula kwengqondo ngesihlungi somoya. Umlandeli ongenalutho onomsebenzi wokuhlanza nokwenza inzalo, uvuthe futhi uhlunge umusi ngale fan ethandekayo.
Isakaza i-DC Fan
Ukusakazwa komoya fan fan. I-BLDC i-brushless motor yamanje, i-compact design nokonga amandla, ingangezelwa ukuxosha omiyane. Ijubane lesishiyagalolunye lokuphakelwa komoya. Swing ngokuzenzekelayo eceleni, phezulu naphansi. Ukuphakama kuyashintsha. 1-2-4-8H isikhathi switch. Imodi yejubane eyi-5: ejwayelekile, yemvelo, yokulala, yomama neye-fetus, imodi ye-ECO Umsindo ophansi onama-11dBA kuphela .Ukuhlinzekwa komoya ngamamitha ayisithupha.
Umlandeli ongenalutho wokuhlanza umbhoshongo
I-2-in-1 fan purifier fan ipholisa isikhala sakho ngenkathi ihlunga i-99.79% yama-allergen kanye nokungcola. Idizayini engenabala kulula ukuyihlanza futhi iphephe ezinganeni. Ngaphandle kwe-grille engathandeki noma izindwani, kulula kakhulu ukusula ukusetshenziswa komuntu okuhlanzekile esikhaleni sasekhaya nasehhovisi ukwenza ngcono ikhwalithi yomoya. Isiza ababhemayo ukunciphisa ukungcola emoyeni. Kungasiza ekuthuthukiseni izimpawu ze-asthma ne-pollen allergies. Ilungele amakamelo ezingane, amakamelo okuhlala namahhovisi amancane kuze kufike kumamitha-skwele angama-30.
I-Mini ephathekayo yomoya opholile
Idizayini encane epholile yomoya opholile ene-fan emibili yomoya onamandla. Inokuphakelwa komoya okuleveli ezintathu. Kupholile kakhulu futhi kuyaqabula ngeqhwa namanzi, umsebenzi ongenazinkungu, okhulula ama-ion amabi, ithangi lamanzi elihlukile, gwema ukuvuza kwamanzi. Igcina umswakama wesikhumba sakho bese iqhuma umoya opholile ukuze ikugweme emoyeni owomile futhi ujabulele ihlobo elipholile nelisha.
Ishukela elincane elinoshukela opheka ikhaya elinemisebenzi eminingi othomathikhi isobho lelayisi elenzelwe imbiza ephansi yelayisi yezempilo ukunciphisa ushukela. Yenza ukulahlekelwa ushukela kube lula njengokuphefumula, usebenze futhi wehlise isisindo futhi udle ngokujwayelekile. Ushukela ophansi, okumnandi hhayi amafutha kashukela welayisi ongaphakeme, kulula ukunciphisa ushukela okhiyiwe ukunambitheka efihlekile kwalokhu kuluma, uthando!
Imfashini futhi iyasebenziseka, kulula ukuyiphatha nokuyisebenzisa. Izacile futhi ihlangene, ayithathi isikhala esiningi. Lo mpheki ohlangene ngeke aqoqe ideski lakho lomsebenzi. Noma, mane nje ukugcine kude ekhabetheni lakho! Ukuvimbela ukomisa nokushisa okweqile. Aluminium ingxubevange PTC heater, iphephe kakhudlwana. Ukufudumeza okuzungezile, pheka ngokugcwele ukudla. Izitsha zokudla zeGrade 304 zilungele ukupheka nokugcina ukudla, umthamo we-900ml.